Mihena amin'ny alalan'ny saina
Mihena amin’ny alalan’ny saina
Noho izany, lasa matavy isika noho ny nampianarina hosainintsika.
Mihamatavy isika satria mihinana nefa tsy noana akory noho ny zavatra niainana tamin’ny fahazazana sy ny régimes izay natao. Mihangeza ihany koa isika satria miala bala mba tsy hikotranana.
Mihinana nefa tsy noana akory isika noho :
ny ohatra ara-pihetsika izay nomen’ny ray aman-drenintsika tamintsika tamin’ny fahazazantsika ;
ny fanerena sy ny fampitahorana izay nataon’ny ray aman-drenintsika tamintsika mba hahangeza kokoa antsika ;
ny fanabeazana izay nomena antsika ka manosika antsika hihinanan-kanina tsy am-pisainana ;
ny fanabeazana, tsy niniana nomena, izay manosika antsika « hihinana ny fihetsehampontsika » ;
ny régimes izay nataontsika ka mandrara antsika tsy hihinana ka mahatonga antsika te hihinana kokoa. Dia avy eo mampanenina antsika ka manery antsika hanasazy tena.
Zara raha mihetsiketsika isika noho ny fandaminantsika ny fotoanatsika sy ny fiheverantsika ny fanatanjahantena.
Inona ary no tokony hatao raha te hihena na hahia ?
Mila manova ny fomba fisainana aloha : mila misaina toa ny olona mahia ara-natoraly.
Noho izany, ny fisainantsika no mampatavy antsika ? IE.
Ahoana ny fisainan’ny olona mahia ara-natoraly raha oharina amin’ny olona matavy ?
1) Tsy miraharaha ny lanjany ny olona mahia
Tsy milanja matetika izany ny olona mahia. Nefa ny olona matavy dia mitandrina be ny lanjany : milanja isan’andro na indray mandeha isaky ny herinandro farafahakeliny. Mahatonga anao ho obsedé(e) amin’ny lanjanao izany fomba izany. Noho izany, rehefa tsy miova na mitombo ny laharana hita eo amin’ny fandanjana dia kivy, na malahelo, na tezitra ilay olona. Manosika azy « hanasazy tena » hanao régimes izany. Nefa fantantsika fa mampatavy ny régimes.
Mba hampihena na hampahia anao, mila hajanona TANTERAKA ny milanja ary aza mifantoka be amin’ny lanjano intsony. Tsy milanja mihitsy aho. Mandritra ny visites médicales any am-piasana ihany no mba hilanjako. Tsy fantatro ny tena lanjako satria atao maimaika fotsiny ireny fandanjana olona mandritra ny visites médicales ireny (tsy esorina akory ny kiraro, ny finday mbola ao am-paosy, …).
Mianàra mihaino ny vatana :
Reraka ve ianao ?
Faly ve ianao ?
Malahelo ve ianao ?
Te hivoaka ny trano ve ianao ?
Ampirimo any amin’ny toerana tsy ahazoanao azy intsony ny fandanjana. Ny tsara aza dia ariana mihitsy.
Manontania tena fa maninona no tena manan-danja be aminao ny lanjanao. Inona no ovain’ireny kilao vitsivitsy ireny amin’ny fiainanao ?
2) Nisafidy ny hahia ny olona mahia
Safidy ny mahatonga ny olona hahia na hatavy. Teren’ny manodidina isika mba hihinan-kanina bebe kokoa na kelikely kokoa, arakaraky ny zava-mitranga. Manana safidy isika na hanaiky ireny fanerena ireny na tsy hanaiky azy. Nanaiky ny fanerena izay manosika azy hihinan-kanina miohatra ny fatra ilain’ny vatany ny olona matavy. Tsy nanaiky izany fanerena izany ny olona mahia. Fa maninona ? Satria samy matahotra ny ho ahiliky ny fiaraha-monina isika na ny ho irery. Ka izany no mahatonga antsika hanaiky ny didy jadon’ny fiaraha-monina. Noho izany, mihinan-kanina isika noho ny tahotry ny tsy ho tian’ny ray aman-drenintsika intsony isika.
Malalaka daholo isika ary manan-tsafidy ! Ka maninona ary no manaiky ny hatavy mba hampifaliana an’ny dada sy neny na dia tsy tiantsika aza izany ? Na amin’izao taonanao izao aza ianao dia voatsikeran’ny ray aman-dreninao, rafozanao, dadatoa na nenitoanao, dadabe sy renibenao, … Teren’ireny olona ireny ianao mba « hatavy bebe kokoa araka ny tiany ». Fa kisoa ve isika no sesefana toa izany ?
Mba hampahia na hampihena anao, misafidiana ny hahia ! Ary tano ny safidinao ! Aza miovaova hevitra !
Rehefa misy olona manery anao hihinan-kanina miohatra ny ilain’ny vatanao, izany hoe miohatra ny hanohananao, dia valio amin’ireto manaraka ireto (anao ny safidy) :
« VataKO io, izaho irery ihany no mahalala izay mety amiko. Matoa ianao misy olana momba an’izany dia complexé(e) amin’ny vatanao ianao ary te hamindra izany olana izany aty amiko. »
« Efa lehibe aho ka mahalala izay tsara ho ahy. Ary ianao ? »
« Calme ianao ! Sakafo fotsiny anaie io e ! »
« Tsy noana intsony aho ! Fa raha tena tianao tokoa ary dia aza misalasala manampy e ! »
« Misaotra betsaka fa tsy te hihinana intsony aho ! »
« Tsy midika hoe tsy tiako ianao ny tsy fihinanako an’io ! »
3) Mihaino ny vatany ny olona mahia
Tsy manery tena handany foana ny eo am-biliany ny olona mahia. Satria tsy rarahiany ny hoe mampijaly ny olona tsy mihinana hono izany e, na hoe tsy fahalalam-pomba hono e. Mihinana izy satria noana, ary tsy menatra ny mamela sisa rehefa tsy noana intsony izy.
Mba hampihena na hampahia anao, aza mieritreritra toa an’ny rainao sy ny reninao intsony ! Aza manery tena handany ny sisa tsy lany mihitsy. Marina fa mahasosotra ny fanariana sakafo. Ka ajanony ary ny famenoana ny vilia amin’ny sakafo mitafotafo be e ! Fenoy amin’ny fatra izay ampy ny hahafapo ny hanohananao ny vilianao. Raha tsy ampy anao izay noloaranao, tsarovy fa mbola afaka manampy anie ianao e.
Manamboara diarin-tsakafo izay hamalianao ireto fanontaniana manaraka ireto isaky ny misakafo ianao (na dia mitsaingotsaingoka aza izany) : aiza (toerana hisakafohananao) ? miaraka amin’iza ? oviana (ora hisakafohanana) ? inona (inona no haninao) ? firy (firy ny fatrany) ? fa maninona (inona no antony hihinananao) ? ahoana (inona no fihetsehamponao) ? Oh :
aiza : ato amin’ny birao, eto amin’ny biraoko, manoloana ny solosaina ;
miaraka amin’iza : miaraka amin’ny mpiara-miasa ;
oviana : alatsianiny 2 nov 2015 tamin’ny 12 ora sy 15 mn
inona : à la sauce bolognaise ;
firy : barkety 1 ;
fa maninona : satria vonona ny sakafo ary mihinana daholo ny rehetra, satria noana kely aho, satria tsy tiako hoe hieritreritra ny olona fa manao régime aho dia tsy mety mihinan-kanina ;
ahoana : stressé(e) kely aho satria misy asa maika izay mila averina amin’ny 2 ora tolakandro nefa mbola tsy vitako, tsy maty ny solosainako satria tiako jerena io asa io eo am-pisakafohanana, tsy manam-potoana hankafizana ny sakafoko aho, matahotra ny hihangeza aho satria mampatavy ny paty ary ny saosy ihany koa satria be menaka loatra, tsy tena noana be akory aho fa manery tena mihinana fotsiny satria tsy hanam-potoana aho rehefa avy eo, sady tsy te heverin’ny mpiara-miasa amiko hoe hafahafa aho, tsy tia an’io spaghettis io akory aho fa voanjobory sy henan-kisoa no tiako hanina ;
Manaova fehikibo elastika lehibe izay mety tsara amin’ny kibonao (tsy manery be nefa tsy malalaka be ihany koa). Rehefa mihinan-kanina dia henoy tsara ny ataon’ny kibonao. Rehefa mihatery amin’ny kibonao ilay fehikibo dia apetraho ny sotro ary mijanona kely aloha. Manontania tena hoe mbola noana ve ianao ?
Rehefa mihinan-kanina ianao, zarao roa ny sakafo haninao. Aza mihinana raha tsy ilay tapany irey iny ihany aloha. Rehefa lany iny, dia anontanio ny tenanao raha mbola noana. Raha mbola noana ianao dia zarao roa indray ilay tapany sisa tavela. Ary ny antsasany ihany hanina aloha. Ary tohizo ohatra izay foana. Aza mihinana intsony rehefa tsy noana intsony an !
Ampirimo anaty sase na barkety ny sisanao. Misy hotely izay ahazoanao angatahana an’ireny. Ary ataovy goûter na sakafo hariva iny, na hano rehefa noana indray. Tandremo anefa sao avela miharihary eo ambanin’ny masonao eo an ! Manjary manosika anao handany an’iny izany noho ny henatry ny famelana sisa.
4) Mamboraka ny fihetsehampony ny olona mahia
Mi-compenser ny fihetsehampontsika amin’ny fihinanan-kanina isika : mihinana ny fihetsehampontsika isika. Oh : mihinan-kanina isika eo am-piandrasana ny fodian’ny vadintsika avy niasa satria ela loatra noho ny mahazatra izy, avy nikapoka antsika tamin’ny fehikibony ny raintsika ka mihinan-kanina isika mba hanadinoana izany, …
Misy fomba hafa maro izay azontsika hi-compenser-na : ny toaka, ny rongony, ny sigara, ny vetaveta, ny mozika, ny dihy, ny kotrana, ny fiantsenana, ny fialam-boly, ny fanaovana facebook, ny fijerena internet, ny fosafosa, ny fandratrana tena, ny fampijaliana olona hafa, … Rehefa miankindoha amin’ny zavatra iray ianao izay dia mi-compenser fijaliana izay tsy hainao ny mamboraka azy aty ivelany. Ka lasa mi-compenser ianao mba hanadinoana izany. Nefa tsy maharitra ela ny compensation, mbola hijanona ao am-ponao ny fijalianao raha mbola tsy vitanao ny mamboraka azy na mandravona azy.
Mba hampahia na hampihena anao, amboraho ny fihetsehamponao :
mitsikia na mihomeheza rehefa faly ;
mitomania rehefa malahelo ;
teneno an’ilay olona nahatezitra na nahakivy anao izay tsapanao ;
raha misy olona tianao, teneno azy izany fa tsy miaritra am-pahanginana eo fotsiny ;
raha nikasi-tanana anao ny ray aman-dreninao dia teneno azy fa nampijaly anao izany.
Mila mandravona ny olana izay mampijaly anao koa ianao raha te hihena na te hahia. Oh : miresaka amin’ny ray aman-dreny sady mandresy lahatra azy fa nampijaly anao ny fikasihan-tanana nataony taminao, miresaka amin’ny ray aman-dreny na ny vady momba ny fanolanana izay natao taminao, miresaka amin’ny vady ary mandresy lahatra azy fa mampijaly anao ny fisotroany toaka ary mety hampisaraka anareo izany, … Mora izany raha tenenina fotsiny fa sarotra raha tena atao. Mila taona maro mba hahavitana izany.
Manontania tena hoe inona no olana izay tianao hadinoana amin’ny fihinanan-kanina ?
Mitadiava vahaolana amin’ny olanao rehetra.
Eo am-piandrasana ny fandravonanao ny olanao, compenseo amin’ny zavatra hafa ny fijalianao : mikotrana, miantsena, mihotra, miresaka amin’ny namana, … Betsaka ny azonao atao.
5) Tsy mifady na inona na inona ny olona mahia
Izay rehetra fady na voarara dia lasa mahasarika bebe kokoa. Rehefa mifady hanina na karazan-tsakafo (paty, vary, vokatra avy amin’ny ronono, …) ianao dia lasa pêchers-mignons ireny, sakafo tsy haritra. Mety ho lasa obsedé(e) amin’iny sakafo iny aza ianao.
Mahalasa adala ny régimes. Mamono tena mba hahia na hihena isika. Tsy mihinan-kanina nefa ilaina ny fihinanan-kanina mba hiainana. Manasazy tena noho ny réactions normales isika : tsy maharitra mifady hanina na karazan-kanina ela be. Normal ny leo ny mifady hanina na karazan-kanina. Mila an’ireo ny vatana ! Iza no nahatsikaritra fa lasa kizitina izy rehefa manao régime ? Miady amin’ny natiora isika, tsy avelantsika hanan-tsafidy ny tenantsika. Normal be isika raha lasa kizitina !
Mba hampahia na hampihena anao dia mila hajanona ny mifady hanina na karazan-kanina na ny mametra ny fatran’ny sakafo hanina. Mila manomboka mihaino ny tena ilain’ny vatana. Te hihinana paty ve ianao ? Manontania tena aloha hoe sao ny fahatsiarovana ny hatsaran’ny paty ataon’ny reninao no hitadiavanao izany sa efa ela ianao no tsy nihinana paty. Ny vatana mantsy mandefa famantarana (signaux) izay mampahafantatra antsika hoe inona no mila hanina. Satria misy nutriments tsy ampy izany ka any amin’ireny sakafo ireny no mety hahitana azy.
Rehefa te hihinana sakafo iray ianao dia manontania tena aloha sao dia mifandray amin’ny fihetsehamponao izany na mila an’izay ny vatana satria efa ela ianao no tsy nihinana an’izany.
Ajanony tanteraka ny manasokajy ny sakafo ho karazany roa fotsiny : ratsy sy tsara, na koa hoe mampatavy sy mampahia na mampihena. Samy mitondra nutriment izay ilain’ny vatana avy ny sakafo.
Aza mifady hanina na karazan-kanina intsony ! Tsy maintsy hatavy ianao amin’ny voalohany, ny fiantraikan’ny régimes nataonao izany. Normal io. Fa rehefa avy eo hi-s’adapte amin’izay ny vatanao ka afaka hanomboka hihena amin’izay ianao.